सामग्री मार्केटिंगको आवधिक तालिका | Martech Zone
सामग्री मार्केटिंगको आवधिक तालिका
आइतबार, जुन 21, 2015 मङ्गलबार, जुन 23, 2015 Douglas Karr
एक दशक पहिले, सामग्री मार्केटिंग यति सरल देखिन्थ्यो, हैन? छविको साथ लेखले आश्चर्यकर्महरू गर्‍यो र कम्पनी वेबसाइटमा पोष्ट गरिएको प्रत्यक्ष मेल टुक्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। द्रुत अगाडि र यो एकदम जटिल स्थान भइरहेको छ। आवधिक तालिकाको रूपमा सामग्री मार्केटिंग ठाउँको यो दृश्यता एकदम सहज छ। यो द्वारा उत्पादित थियो क्रिस ताल, एक्कोल्स्टेन्सीमा उत्पाद विकास निर्देशक।
प्राप्त गर्न हाम्रो साइटमा पूर्वावलोकनमा क्लिक गर्नुहोस् पूर्ण छवि, यो छाप्न लायकको छ र तपाइँको डेस्कमा राख्छ। वा हुनसक्छ कि कुनै बोर्डमा तपाईं डार्ट टस गर्न सक्नुहुनेछ र त्यस दिन तपाईंको ध्यान एक विशेष रणनीति, ढाँचा, प्रकार, प्लेटफर्म, मेट्रिक, लक्ष्य, ट्रिगरमा केन्द्रित गर्नुहोस् वा अवस्थित सामग्रीलाई अप्टिमाइज गर्नुहोस्! गत हप्तामा, उदाहरणका लागि, हामी लिंकहरू, भिडियोहरू, सामग्री, वा इमेजरी अपडेट गर्न मार्टेकमा १०० भन्दा बढी लेखहरू पार गर्यौं। हामीले टेक्नोलोजी वा विगतका घटनाहरूमा केही दर्जन लेखहरू मेटाउछौं जुन अब साइटमा कुनै मूल्य प्रदान गर्दैन।
सामग्री मार्केटिंगको आवधिक तालिका कसरी प्रयोग गर्ने
यसमा, क्रिस आफ्नो 7-चरणको सामग्री मार्केटि success सफलताको लागि मार्गनिर्देशनबाट हिंड्छन्, रणनीतिबाट शुरू गरेर र डबल जाँच गरेर समाप्त हुन्छ र तपाईंको कामलाई अनुकूलन गर्दछ।
रणनीति - सफलताको मौलिक कुञ्जी। योजना र ध्यान आवश्यक छ। तपाईलाई स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ, तपाईको लामो अवधिको व्यावसायिक लक्ष्यहरूमा म्याप गरिएको। एक्न्सल्टेंसीको पनि धेरै उपयोगी छ सामग्री रणनीतिमा उत्तम अभ्यास गाइड.
ढाँचा - सामग्री धेरै बिभिन्न आकार र आकारहरूमा आउँदछ। नोट गर्नुहोस् कि तपाईं सामग्रीको एक टुक्राको लागि बहु स्वरूपहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
सामग्री प्रकार - यी आधारित छन् सामग्रीको सामान्य प्रकारहरू कि एक्न्सल्टन्सी को लागी राम्रो काम गर्दछ।
प्लेटफर्म - यी सामग्री वितरण प्लेटफार्म हुन्। तपाईं यी मध्ये केही मालिक हुन सक्नुहुनेछ (उदाहरण #,,, तपाईंको वेबसाइट)। अन्य सामाजिक साइटहरू हुन् (तपाईंको आफ्नै, तपाईंको नेटवर्क, तेस्रो पक्षहरू)। यी सबै मद्दत तपाईंको सामग्री को बारे मा शब्द फैलाउन।
मेट्रिक्स - यसले तपाईंलाई तपाईंको सामग्रीको प्रदर्शन नाप्न मद्दत गर्दछ। संक्षिप्तताको उद्देश्यका लागि, मेट्रिक्सलाई एक साथ समूहमा राखिएको हुन्छ (उदाहरण: अधिग्रहण मेट्रिक्स).
लक्ष्यहरू - सबै सामग्री तपाइँको प्राथमिक व्यापार लक्ष्य समर्थन गर्नु पर्छ, कि धेरै यातायात उत्पन्न गर्न को लागी हो, वा अधिक बेच्न को लागी, वा ब्रान्ड सचेतना बढाउन। लेजर-निर्देशित सामग्रीले यी केही बक्सहरूमा टिक गर्नेछ।
साझेदारी ट्रिगरहरू - यो धेरै हदसम्म प्रेरित छ सामग्री साझेदारी गर्न अनपेक्षित मीडियाको ट्रिगरहरू। साझेदारी पछाडि भावनात्मक ड्राइभरहरूको बारेमा सोच्नुहोस्, र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको सामग्रीले व्यक्तिलाई केही महसुस गराउँछ।
सूचीबारे - सबै सामग्री खोज, सामाजिक, र तपाइँको व्यापार लक्षहरु लाई समर्थन गर्न को लागी अनुकूलित हुनु पर्छ।
टैग: सामग्री ढाँचासामग्री मार्केटिङसामग्री मार्केटिंग चेकलिस्टसामग्री मार्केटिंग लक्ष्यहरूसामग्री मेट्रिक्ससामग्री प्लेटफार्महरूसामग्री साझेदारी ट्रिगरहरूसामग्री रणनीतिसामग्री प्रकारहरूतत्वहरूको आवधिक तालिका
बिक्री र मार्केटिंग: सिंहासनको मूल खेल
ठूला ब्रान्डको समस्या छ, PEAR एक समाधान छ
जुन २,, २०१ बिहान :22:२२ बिहान
तस्विर उच्च रिजोलुसन पर्याप्त छैन ... जब हामी यसलाई प्रिन्ट गर्ने प्रयास गर्दछौं, यो अवैधानिक छ। राम्रो विचार जबकि!
जुन 22, 2015 मा 10: 44 PM
यहाँ एक सीधा लिंक छ आफ्नो साइट बाट एक उच्च रिजोलुशन छवि डाउनलोड गर्न को लागी - आशा छ कि यसले मद्दत गर्दछ! लिङ्क
डग - के एक महान ब्लग र चतुर, चतुर अवधारणा! यो विचार मनपराउँनुहोस् !!! मेरो ईन्जिनियर श्रीमान्, जसले सबै कुराको मार्केटिंग बेवास्ता गर्नुहुन्छ, र यो पनि रोचक लाग्यो। तपाइँ एक रोचक, नवीन तरीकाले महान सामग्री वितरित गर्न असफल कहिल्यै। धन्यवाद! क्याथी
जुन 22, 2015 मा 10: 43 PM
धेरै धेरै धन्यवाद, क्याथी! मैले साँच्चै कत्ति अनौंठो तरिकाले यो रणनीति कल्पना गरीएको थियो को सराहना गर्नुभयो! इकोन्सल्टेंसी सबै क्रेडिटको योग्य छ।
हे डग - आवधिक तालिका प्रेम को लागी धन्यवाद भन्न चाहान्छु! म यसको प्रतिक्रियाबाट नम्र रहन्छु। कुनै पन उद्देश्य छैन ..; )
जुन 23, 2015 मा 12: 39 PM
क्रिस, तपाईलाई पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दैन। म यसमा गएको कामको कल्पना गर्न सक्दिन!
मार्क्स 11, 2016 मा 4: 14 PM
साँच्चिकै राम्रो छवि! राम्रो स्रोत
अगस्ट 30, 2016 मा 8: 19 AM
यो insaaane छ! Uber geeky, डगलस! मलाई आवधिक तालिका मनपर्दछ र कहिले यस्तो अपेक्षित हुने आशा गर्दिन! धन्यवाद! 🙂
अगस्ट,, २०१ 30 2016:२१ अपराह्न
मैले सोचे कि यो एकदमै राम्रो थियो! डिजाइनरहरूलाई कुडो।